सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ प्रतिशत घट्यो
वैशाख ३०, काठमाडौं । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले मंगलवार प्रकाशित वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ५९ करोड नाफा कमाएकोमा चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ३३ करोडमा सीमित भएको छ । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको सञ्चालन नाफा १२ प्रतिशतले घटेकाले नाफा घटेको हो ।
सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी भने २२ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ अर्ब ४० करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ४ अर्ब १८ करोड आम्दानी गरेको छ । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १५ करोड ३२ लाख ऋणात्मक रहेको छ ।
चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ७८ करोड भएको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ४ अर्ब ८२ करोड सञ्चित रहेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. १ खर्ब ३० अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. १ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको हो ।
प्रतिशेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव ९१, मूल्य आम्दानी अनुपात १५ दशमलव २८, तरलता अनुपात २० दशमलव ४२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५३ दशमलव ४४ रहेको छ ।
सजिलो लघुवित्त र समीट लघुवित्तले शुरु गरे एकीकृत कारोबार [२०७७ असोज, ६]
२२.९१ अंक तल झर्‍यो बजार, २ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार[२०७७ असोज, ६]
प्रभु बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत[२०७७ असोज, ६]
मर्जर सम्झौता गरेपछि समाज लघुवित्तको शेयर सूचीकृत भएपनि कारोबार भने रोक्का हुने [२०७७ असोज, ६]
१५५२.८० विन्दुमा नेप्से, १ अर्ब ७१ करोड बराबरको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, ६]
सञ्चय कोषको अगुवाइमा बनाइँदै बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
पाम आयल निकासी : नेपाली दूतावासले बुझायो भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पत्र
अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै अर्थसमिति
७० प्रतिशतले घट्यो औषधिको उत्पादन
खर्च बढ्ने भएपछि तत्काल कर्मचारी नियुक्ति नगरिने